Macalin Zidane oo markii ugu horeysay ka hadlay saxiixyada cusub ee kooxda Real Madrid – Gool FM
(Spain) 20 Juunyo 2019. Tababaraha kooxda Real Madrid ee reer France Zinedine Zidane ayaa wareysi uu dhawaan bixiyay wuxuu kaga hadlay 5-ta saxiix ay ilaa iyo haatan Los Blancos ka sameysay suuqan xagaaga.
Real Madrid ayaa ilaa iyo haatan suuqan xagaaga dhameystirtay heshiisyada xiddigo ay ka mid yihiin, Ferland Mendy, Rodrygo Goes, Eden Hazard iyo Luka Jović.
Zinedine Zidane ayaa wuxuu ugu horeyn wareysi uu bixiyay ku sheegay:
“Aad ayaan ugu faraxsanahay heshiisyada cusub, waa xilli ciyaareed cusub, hamigeena waa inaan dib ugu soo laabano ku guuleysiga koobab, waa muhim inaan heyso xilli ciyaareed fiican sanadka soo aadan”.
Macalinka reer France ayaa tilmaamay in saxiixyada ay si weyn muhiim ugu yihiin diyaar garowgooda xili ciyaareedka cusub.
“Dabcan, tani waa qorsheheena iyo waxa aan dooneyno, waana sababta aan ula soo saxiixanay ciyaartoydan, Xilli ciyaareedka ugu horeeya ee ciyaartoyda waa muhiim, waxa ugu muhiimsan ayaana ah inay nala joogaan maalinta ugu horeysa”.
“Waxay kulamo u ciyaarayaan xulalkooda, waxeyna heli doonaan fasax hal bil ah, kaddibna weynala joogi doonaan”.
“Waxaan bilaabi doonaa inaan diyaarino dhamaan ciyaartoyda, xiddigaha cusub, kuwa horey u joogay iyo ciyaartoyda da’ayarta ah ee sameyn kara wax badan si ay u caawiyaan kooxda xilli ciyaareedka soo socda, waxayna arintan inoo tahay muhiim”.